Sooyaalkii Nololeed Iyo Siyaasadeed Ee Muj Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe)Qalinkii; Fu’aad Sh. Abuubakar. | WAJAALE NEWS
Sooyaalkii Nololeed Iyo Siyaasadeed Ee Muj Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe)Qalinkii; Fu’aad Sh. Abuubakar.
May 6, 2019 - Written by Editor:
“Dambarkeedii Maandeeq nimaan, doonin baa dhamaye,
Shicibkii dagaalka u gala, daadsan suuqyada e’,
Dadkan wada dallacay dawladahan, dahabka shiilaaya,
Da’deennay ahaayeen kuwaa, loo dabbaal-degaye,”
Maandeeq, Timacade, Hargeysa, 1964kii,
Sida la wada ogsoon yahay ummadda Soomaliland amaba si guudba dhamaan bulshada ku hadasha luqada Soomaligu waxay baahi weyn u qabaan qorista taariikhda,sooyaalka iyo soo gudbinta dhacdooyinkii mudnaa ee bulshada. Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe) ayaa ka mida tirada aadka u yar ee adeegsaday qalinka, markay warqada iyo qalinka isla helaana si xeel dheer oo farshaxanimo ku dheehan tahay u xardha taariikhda ummadan. Kooxdan tirada yar ayaa marba dhinac ka dara waadaanta. Boobe wuxuu in badan bulshada ugu tilmaaman yahay inaanu marnaba qalinkiisa ka hagran xusida shakhsiyaadka mutay in la xuso ee la hiigsado sida Cabdilaahi suldaan”Timacade” , Maxamed Xaashi “Gaaarriye”,Maxmaed Moooge Liibaan, Garaad CabdiQani Garaad Jaamac, Suldaan Sheekh Muuse Goodaad,iwm (Ilaahay dhamaantoodba ha u naxariisto). Sidoo kale ayuu Boobe mar uu si hagar la’aaneed u dhex jibaaxaa dhacdooyinkii reebay wacdaraha ,marna wuxuu si mug dheer isku dul istaaga hab halgameedkii ururkii xaq u dirirka ahaa ee SNM.
Si kooban waxaa loo odhan koraa waa Qalin maal dhiiran, ururiye suugaaned iyo sooyaalka la soo dhaafay,mujaahid qalin iyo qoriba ku halgamaya kolba kii loo baahdo, waa codkar gartiisa dhacsada, iwm.
Boobe waa webi gun dheer oo aanay inoo suurto-galayn inaynu waadaanteenna ku soo dhurno waxa dhex maaxanaya maankiisa, hase yeeshee waxaa mudan in la tilmaamo daba-taxanta ka dhalata markuu qalinka hinjiyaba, waa ma-daale firfircoon siiyana mudnaanta ay leedahay in runta laga sheego soo-jireenka ummadda haba qadhaadhaatee. Wuxuu cabbiraa kana af-celiyaa dareenka hadba jira isagoo tibaaxaya sida waayuhu inoo hagayo, mar walbana ay habboon tahay in horumarka ummadda lagu salleeyo dib-u-jalleecidda soo-jireenka, la-jaan-qaadka waayaha iyo u diyaar-garowga jawiga timaadada.
Iyada oo aynu dul-ka-xaadsanayno taariikh-nololeedka Boobe Yuusuf Ducaale, Bahda Mareegaha Farshaxan waxay garatay inay u hibbeyso hadyad ahaan hal-ku-dheggeennii ahaa “Baro ………” ku soo bandhigidda waayihii nolosha Qoraagan awday baahi weyn oo dhex haabanaysay bulshadeenna. Kollay waxaa caado inoo ah in qofku markuu dhinto qalinka loo qaato si looga warramo, hase yeeshe siduu Abwaan Gaarriye ba eray- murtiyeedkiisa ku duugay ayey Bahda Mareegaha Farshaxan isagoo nool oo wali ina dhex jooga Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe) soo bandhigayaan taariikh-nololeedkiisa inta ay ka taaban karaan, waxaanu yidhi Gaarriye (IHUN):
“Ha laguu ilmeeyee, Horto dhimo af maahee,
Eeggoo la noolyiyo, Ifkaan kaaga baahnahay,
Wax yar oo aqoonsiya, Oon aad u buurnayn,
Oo weliba eegeey, Igu sii amaahoo,
Ictiraafka buuxee, Aakhiro markaan tago,
Iilka igu sugaayiyo, Ayaantaan xabaal galo,
Oohintaan mutaystiyo, Akowntkayga laga jaro,
Maxamed Xaashi “Gaarriye”-IHUN-
Boobe wuxu ku dhashay magaalada Hargeysa ahna caasimadda waddanka Somaliland 7/12/1948kii. Wuxu ku kacaamay kuna hanaqaaday isla magaaladaa. 1955kii ayuu Malcaamad-quraantii ka bilaabay Macallin Xabashi oo ku taallay dooxa qarkiisa meel galbeed kaga beegnayd Hudheelka Hadhwanaag. Macallin Xabashi wuxu ahaa nin Itoobiyaan ah oo la odhan jiray Sheekh Axmed Nuur. Beeraley ayuu Itoobiya ka ahaan jiray intii aanu Hargeysa iman.
Magaalada Hargeysa xilligaa waxaa ka jiray dhawr malcaamadood oo ay ka mid ahaayeen malcaamada macalin Laangadhe,(waa Sh. Cabriraxmaan oo dhaley Cumar dheer kana mid noqday baarlamaankii ugu horeeyey ee Soomaaliland) iyo malcaamada Macalin Xabashi oo magaciisu ahaa Sh. Axmed Nuur Xabashi. Asal ahaan Macalin Xabashi wuxuu ka soo jeeday wadanka Itoobiya sida magacu lagu ladhey malcaamaduba uu xusayo. Wuxuu ahaa beerfale u diran mid ka mid ah maalqabeenadii beeraha lahaa (Landlord)ee Xabashida. Hase yeeshee qalbigiisa ayaa dareen muslimo galey, waxaanu u baxsadey magaalada Jigjiga, kuna islaamey gacanta Sh. CabdiSalaan Xaaji Jaamac. Hase yeeshee wxuu Sh Cabdi Salaan u sheegay Axmed Nuur in uu maalqabeenkaasi iman karo Jigjiga. Sidaasaa Sh Cabdisalaan ula soo xidhiidhay Macalin Maxamed oo ahaa imaamkii masjid Jaamaca Hargeysa kana codsadey inuu Quraanka baro Axmed Nuur oo islaamey. Halkaas ayuu ka aflaxey Macalin Axmed Nuur ka dibna kula wareegay malcaamad uu lahaan jiray macalin Hargeysa ka tagey
1956kii, Boobe wuxu galay Madarasaddii Cabdiraxmaan Sheekh Ibraahin, Baraawe, oo markaa ku taallay dariiqa Saldhigga Dhexe koonfur ka mara ee Maxkamadaha taga. Goor danbe oo isla 1956kii ah ayaa Madrasaddaa loo rarayaa meel Xabsiga Dhexe kaga beegan galbeedka.
Malcaamaddaa wuxu ku jiray 1956kii ilaa 1957kii. Madarasaddan waxaa lahaa Sh. Maxamed Sh. Ibraahin Baraawe. Magaca lagu ladhey Madarasaddu wuxuu ka yimid Sh. Ibraahin ayaa waxbarashadiisii Diineed ku soo bartey magaalada Baraawe. Waxaaney Madarasaddaasi markii hore garabka ku haysay Ddawlada Hoose ee magaalada Hargeysa hase yeeshee muddo ka dib ayey u soo wareegtay halka ay immika tahay ee Jeelka Hargeysa agtiisa. Ardeydii ay madarasaddaa Sh. Baraawe ku wada jireen waxaa ka mid ahaa mujaahid Xasan Ciise Jaamac.
1957kii ayaa Boobe la qoray Dugsigii Hoose ee ‘Reece’ (Riis) la odhan jiray waxaanu dhiganayay sannad keliya. 1958kii waxa loo beddelay Dugsigii Hoose ee Biyo-dhacay oo uu dhammaystay 1959kii. Sannadkii xornimada ee Afrika oo ahaa 1960kii ayuu u wareegay Dugsiga Dhexe ee Sykes Thompson Intermediate School markii danbena loo bixiyay Axmed Guray,kagamuu hadhin waxbarashadii halkaa sida in badan dhici jirtay waagaa oo heerkaa lagu shaqo tagi jiray ama dibadaha loo carraabi jiray .
Dahab la gaadhinee danti ay abaar tahay
1964kii ayuu magaalada Muqdisho ka bilaabay Dugsigiisii Sare isagoo galay Dugsigii Sare ee Benaadir oo markaa la furay. Wuxu ka qalin-jebiyay 1968kii. Ardey badan oo reer Soomaaliland ah ayaa waxbarasho ahaan u tagey dugsigaa.
Markaa Boobe oo inooga waramaya sababta uu dugsigaasi u galay ayaa yidhi: “Iskuulladii ugu cusbaa ayuu ka mid ahaa. Waxa dhisay oo gacanta ku hayay ardaydana wax bari jiray macallimiin ka timid Midowgii Soofiyeti, Dugsiga Xamar ugu ballaadhan ayuu ahaa. Boarding ayuu ahaa. ‘Foom’ ama sannad waliba saddex fasal oo min soddon qof ah ayuu ahaa. Bishii waxaa la bixin jiray 80 shilin”.
1968kii ayuu waxbarasho Jaamicadeed ku tegay dalkaa Talyaaniga. Barashada luqada Talyaaniga ayuu ka bartay Jaamicadda luqada ee magaalada Perugia oo la yidhaahdo ‘Universita per gli Stranieri di Perugia’. Markii uu dhammaystay luqadii wuxu u wareegay magaalada Ferrara oo uu ka baranayay cilmiga Joolajiga. Wuxu halkaa wax ku baranayay ilaa 1972kii.
Qalinkaa wax suureeya Kugu simma halkaad doonto
Saaxiib kal furan weeye Sunto fara ku hayntiisa
Weligaa ha sii deynin. Sisin iyo ku beer muufo
Iyo laanta saytuunka Ku qotomi sugnaan waarta
Iyo nabadda seeskeeda Samo iyo ku doon heedhe
Sirta Nolosha, Hadraawi,
Dalkii ayuu Boobe ku soo noqday, ka-dibna mar kale ayuu dibadda waxbarasho u tegay. Markanna waa magaalada Moscow oo markaa xarun u ahayd Midowgii Soofiyeti waxaanu Boobe ku diyaariyay koorsooyin ahaa cilmiga siyaasadda.
Halkaa markay arrini marayso wuxuu Boobe dib ugu soo laabtay dalalkii la isku odhan jiray Jamhuuriyada Dimuqraadiga Soomaaliya kana mid noqday hawl-wadeennadii Waaxdii Xidhiidhka Dadweynaha (PRO) ee Golihii Sare ee kacaanka hoos iman jirtay, Qaybteedii Tababarrada sannadihii 1973-1974. Hase yeeshe kumuu sii nagaan halkaas ee isla gu’gii xigayba wuxuu u digo rogtay inuu wakiil uga noqdo Xidhiidhkii Guud ee Shaqaalaha Wersheddii Kalluunka ee Laas-qoray.
Gu’ba gu’ ha riixee, 1dii Juulay, 1976kii wuxu ergay ka noqday aasaaskii Xisbigii Hantiwadaagga Kacaanka Soomaaliyeed (XHKS). Markii uu Shirweynihii aasaaska XHKS dhammaday wuxu ka mid noqday hawl-wadeennadii Hoggaankii Aydhiyoolajida oo ka hawl-geli jiray Xaruntii Xisbiga oo ahayd Guriga Ummadda.
Boobe wuxuu ka hawl-galey Hoggaankii Aydhiyoolajiyada. Isaga oo nooga warramaya Xisbigaasina wuxu yidhi:
“Xisbiga Hanti-wadaagga Kacaanka Soomaaliyeed (XHKS), wax kale ma uu ahayn oo aan ahayn agab kale ama qalab kale oo nidaamkii millateriga ahaa u adeegsanayay in uu dalka gacan bir ah ku maamulo isaga oo iska dhigayay nidaam rayid ah oo xisbiya. Ta kale ma ahayn nidaam hanti-wadaag ah oo dhaqan ahaan ayaanay saraakiisha millaterigu u noqon karin wax aammina aragtida Hanti-wadaagga. Adduunyada nidaamyadii Hanti-wadaagga ahaa ee ka jiray waa ay ka soo hor-jeedeen askari ama nidaam milleteri oo sheegta Hanti-wadaag. Fikir ahaan ayaa loo aamminsanaa in aanay saraakiisha millaterigu noqon karin ama dad dimuqraadiyiin ah. Sidaa darteed, si uu adduunka indho-sarcaad ugu dhigo ayuu Siyaad Barre u doonayay una jeclaystay in uu u digo-rogto nidaam shacbiya ama ‘civil’ ah. Bal u fiirso maalmihii: Dhallinyarada oo 15ka Meey ahayd, Maalinta haweenka oo 8da Maarj ahayd, Maalinta Shaqaalaha oo 1da Meey iyo aasaaskii XHKS oo lagu beegay 1dii Juulay 1976kii. Maalmo iyo munaasbadii si dhalanteed ah la isugu beegay oo aad garanayso in ay ahaayeen wax samays ah oo aan xaqiiqada ku fadhiyin. U fiirso maalmaha dhalashada ee Soomaalida Qurbo-joogga ah inta badan waa 1da Jeeniweri sannadka ay doonto ha noqotee”.
Sidoo kale waxa jiray culays dibadda kaga imanayey oo xukuumaddii millatariga aheyd ku khasbayey inay sameeyeen xisbi rayid ah oo laga gudbo xukuumadda millatariga ah. Mujaahid Boobe oo sii watay hadalka ayaa yidhi:
“Wax kale ma jirin oo aan ahayn culays dibadda kaga imanayay oo ahaa in nidaam shacbiya oo xisbiyeed dalka laga hirgeliyo. Waxaan filayaa in beesha Hanti-wadaaggu culayska ugu badan saaraysay. Dhinaca kale waqti ku filan ayuu millateri ahaan ku soo waday, markaa wuxu u baahnaa in uu digo-rogto oo iska dhigo wax dimuqraaddiya isaga oo aan u dhalanba oo askartii gumeysigu soo ababiyay ahaa”.
Isla waqtigan wuxu ahaa tifaf-tiraha qaybtii afka Soomaaliga ku soo bixi jirtay ee wargeyska afka XHKS ku hadli jiray ee Halgan.
Wuxuu xubin ka ahaa Guddidii Bandhiggii Fanka iyo Sugaanta, BANFAS ee dal ahaan loogu diyaar garoobayay Bandhiggii Beelaha Madow (FESTAC) ee lagu qabtay Nayjeeriya 1977kii. Xiliyadani ilaa 1981-kii wuxuu si joogto ah wax ugu qori jiray barnaamijyadii todobaad laha ahaa ee idaacadii raadyoow Muqdisho iyo xiddigtii Oktoober ee maalin laha aheyd.
Bishii Janaayo 1981-kii, waxaa Boobe loo igmaday inuu xubin ka noqdo Golihiii Dhexe ee Jabhadii Xoreynta Soomaali-galbeed (WSLF), isagoo isla markaana loo doortay Guddoomiyihii Gobolka Xarshin. Mujaahid Boobe oo ka hadlayay waxa sababay in uu Jabhaddaa ku biiraa wuxu yidhi: “Dhammaadkii 1981kii ayaan ka mid noqday Jabhaddii Xoreynta Soomaali-galbeed. Waxaan noqday xubin Golaha Dhexe, iyo badhasaabka Gobolka Xarshimeed. Ku-talo-galku wuxu ahaa in Jabahaddaa lagu yeesho ciidan sidaana la isku hubeeyo, ka dibna ay suurto-gal noqoto in Jabhad kale looga digo-rogto.
Jabhada Soomaali-galbeed oo meel Afgooye (Lafoole) u dhow ku leh Shirweyne, ayaa waxa I geeyay oo gurigaygii Xamar iigu yimid Axmed Yuusuf Ducaale oo wada ama ay la socdeen: Suldaan Cabdiraxmaan Maxamed, Cali Jire iyo Barre Xaashi Cilmi. Shirweynihii ayay i geeyeen halkaasaana la igu daray Golaha Dhexe, sidii ayaan kaga tegay Xaruntii XHKS ee aan ka hawl-geli jiray”.
Xidhiidh ma ka dhexeeya Jabhadii Soomaali-galbeed iyo Guutadii 4aad oo ka dhalatey iska-caabbintii Jabhada Soomali-galbeed oo dhib ku haysay dadkii degaanka ag-agaarka Gabiley? Boobe oo nooga war-celinayey faah-faahinta ku saabsab xidhiidhka jabhadii Soomaali Galbeed iyo Guutada 4aad ayaa yidhi:
“Guutadii 4aad ee SNM unugga u ahayd, waxay ka tirsanayd Jabhaddii Soomaali-galbeed, gaar ahaan Gaaskii Axmed Gurey oo ay ka ahayd Guutada 4aad. Gaasku wuxu ka koobnaa ilaa 5 Guuto ayaan u malaynayaa. Guutada 2aad ayaan u malaynayaa in ay ahayd Hawiyaha Itoobiya, waxaana hoggaamin jiray Korneyl Axmed Cali Nuur. Guutada 4aad waxa hoggaamin jiray Maxamed-Cali Faarax. Laba taliye oo saaxiibbo halgan-wadaag ah ayay ahaayeen, markii dambena waa ay kulmeen oo isu yimaaddeen. Waxaan u malaynayaa in ay ahayd dhammaadkii 1982-kii iyo meel la yidhaahdo Haro Ibro Muusa oo ka tirsan gobolka Fiiq ee Itoobiya”.
Boobe, waqti ku beegnaa badhtamihii 1981-kii ayuu ka degay magaalada Cadan isaga oo ku biiray Xisbigii Dadka xoogsada ee Soomaliyeed afka Ingiriisigana loo yaqaannay Somali Working People’s Party (SWPP)) ee ka dhisnaa magaalada Cadan ee dalka Yemen, kani oo gacan-saar la yeeshay Jabhadihii Somali Democratic Liberation Front (SDLF) iyo SomaIi Salvation Front (SSF) si ay u unkaan ururkii Somali Salvation Democratic Front (SSDF) bishii Oktoobar 1981-kii, kulankaas oo ka dhacay Addis Ababa. Boobe markan wuxu mucaarid ku noqdey xukuumaddii Siyaad Barre, waxaanu u hinqadey socdaal dheer oo uu kaga tegay magaalada Cadan si uu xubin uga noqdo jabhadihii halkaa ka jiray.
Boobe oo ka waramaya halkey is-diiddada isaga iyo xukuumaddii M. S. Barre ka timid ayaa yidhi:
“Qof kasta oo dareen lahaaba waa uu diiddanaa hab-dhaqankii nidaamkii millateriga ahaa. Maamul ku-sheeg aan dal iyo dad u danaynayn, bal se koox iyo qabiil u danaynayay ayuu ahaa .Saaxiibbo aanu Xamar ka wada shaqayn jirnay ayay ahaayeen oo markaa Cadan deggenaa. Siciid Jaamac Xuseen (Gucmudi) ayaa Jabhadda madax ka ahaa. London ayuu hadda deggan yahay waana Qoraa caan ah.”
Labada jabhadood ee ka jiray xilligaa dalka Yemen ayaa kala ahaa Xisbigii dadka xoogsatada Soomaliyeed (SWPP) ee ka dhisnaa magaalada Cadan ee dalka Yemen,iyo jabhadii SDLF oo gacansaar fiican ka dhexeeyey . Waxaaney kala ahaayeen siduu Boobe nooga warramey:
“SWPP iyo SDLF waxay ahaayeen jabhado aamminsanaa nidaamka hanti-wadaagga oo aad u koobnaa. Waxaan is-leeyahay xubnaha Jabhad walba ka tirsanaa ee markaa nala joogay labaataneeyo kama ay badnayn. SSF waxay ahayd Jabhad reer oo ballaadhnayd oo hubeysneyd oo Cabdillaahi Yuusuf madax ka ahaa.
Boobe oo mar kale inooga waramaya siduu ugu biirey xisbigii SWPP ee magaalada Cadan ayaa yidhi:
“Cadan ayaan tegay, aniga oo Jabuuti ka ambo-baxay, sidaas ku tegay oo aan ku degay Hudheelka crescent Hotel oo ku yaallay Xaafadda Tawaahi. Saaxiibbaday ayaan ugu tegay, markii dambena waxaanu isu raacnay Addis Ababa oo aanu is-bahaysi kula yeelannay SSF oo Cabdillaahi Yuusuf Hoggaaminayay iyo SDLF oo uu hoggaaminayay Cabdiraxmaan Caydiid. Waxaana samaysmay Jabhaddii la odhan jiray SSDF”.
Sababo jiray oo ammaan awgeed wuxuu mudane Boobe ka xuub-siibtay xubinimadii ururkii SSDF, kana mid noqday xubnihii firfircoonaa ee ururkii SNM. Jagooyin kala duwan ayuu ka qabtay ururka kuna jiray ilaa laga hantiyey guushii dhamaystirneyd ee xornimadii Somaliland. Waxaana ka mid ahaa siduu noo sheegay mujaahid Boobe: “SSDF waxay iska noqotay boqortooyo uu leeyahay Cabdillaahi Yuusuf oo digtaatooriyad qabyaaladeed ahayd. Waxaan is-leeyahay nidaam ahaan tii Siyaad ayaa dhaantay. Sidaas ayaan uga digo-rogtay”.
Mujaahid Boobe intii uu ku jiray jabhada SSDF xidhiidh ayuu la lahaa xubnaha ururkii SNM., Xidhiidhkaasi oo fududeeyey inuu mujaahid Boobe si fudud u digo-rogan karo, kol haddii ujeedada uu yimid aaney hirgalin kareyn SSDF oo qaab boqortooyo u dhisneyd.
Intii uu ku jiray ururka ee ka horreysay xornimadii horaantii 1991-kii, wuxuu jagooyin sarsare ka soo qabtay ururka SNM, waxaana ka mid ahaa:
– Xubin Golaha dhexe ee SNM,muddo shan sanno ah.
– Xoghayaha Golaha Dhexe iyo Gudida Joogtada, muddo shan sanno ah.
– Xoghayaha Warfaafinta, muddo saddex sanno ah
Markii uu dhamaaday halgankii dheeraa ee xaq u dirirka ahaa, dibna loo hantiyey xornimadii la duudsiyey,Mudane Boobe umuu arag inuu gutay xilkiisii dibadana sahay umuu qaadan manaanu u xadhko xidhan baa’biinta iyo hogaaminta dabadhalowgii daydayga ahaa :
Dul iyo hoosba waan ugu digay waa dixdhagaxeede
Dugsi ma leh, Timacade:
Laba oorya walaaliyo ilmaadeer is maquunsha
lama sheegin aduunkee marka aan ugu liito
mar aan eeda sokeeyiyo ilmahayga ku waayo
mar aan aayo la’aanta seedigay ugu aaro
oo walaashay asay qaaddo mar haday aqalkayga
haddii layga adkaadiyo hadaan raystey idhaahdaba
mar lay oohin u tahay bal maxaan istafiiday
Hase yeeshee wuxuu go’aansadey inuu la hawlgalo maamulkii Cabdiraxmaan Axmed Cali (IHUN), isagoo noqday wasiiru-dawlaha arrimaha dibadda ee Somaliland intii u dhexeysay 1992-1993-kii.Si xeel dheer baanu ugu qancay gooni-goosadka iyo xornimada la gaadhay waxaanu yidhi islamarkii lagu dhawaaqay dib ula soo noqoshada xornimada la duudsiyey: “waxa halkan ila jooga guddoomiyaha ururka SNM iyo guddoomiyaha golaha dhexe si ay erayo kooban uga yidhaahdaan go’aan Taariikhi ah oo raad ku yeelan doona guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolada waqooyi waxaana hadalka ku horeynaya gudoomiyaha golaha dhex Ibraahim Meygaag Samatar”
lixdankii jihaad kaan galee Calanka loo joojay
Jabuuti iyo Hargeysiyo halkay Xamar ka soo jeedo
Jubbada Kismaayiyo Berbera Jawhar iyo Saylac
khadkii Xayle loo joogsadiyo Jooma Kiniyaate
Soomaaloo jamhuuriyad qudhoon saaka kala jeedin
anaba waayo waataan jeclayn kuna jibaysnayne
haddaan wada jirkeedii dhacayn jixinjixii laabta
ogow jeer dambo layga rido jar iyo haadaanta
qalbigayga waataan ka jaray jeerenkii mudaye
Ninba meeli u cad e’, himiladii halganku wali hiyigiisa kama go’in mar walba haqabtirka ummada ayuu u heelanaa halka dar kale ay la qumanaatay ka qaybqaadashada sanadihii burburka iyo reeraysiga.
Qofkii samo u kaca, ma seego dariiqa suubanee Ilaahayna wuu ku sugaayee, wuxuu noqday xoghayaha guddidii diyaarinta dastuurka Qaran oo ay ku jireen toban xubnood oo ka mid ah guddiga baarlamaanka sannadihii 1994-1995-kii.
nin walbaa degmuu leeyahaye daaqsintiyo ceelka
hadba kaad dan wada leedihiin daabka wada goosta
siyaasadaha layguma dagee daakhil iyo khaarij
distoorkiina xaashida ku dhiga qalin aan duugoobin
Dardaaran, Cali Xasan, Banfas(IHUN)
Isla xiliyadan waxaa bilaabmay hub ka dhigistii ciidamadii ku salaysnaa reeraysiga si loo sameeyo ciidamada qaranka Soomaliland, kama gaabsan hawlgalkanee wuxuu ku sifoobay inuu noqdo la taliyihii guddidii loo xilsaaray hub ka dhigista .
Ka rogoo hadana saar, dalka gudihiisa uun kamuu taageerin baahida ummada iyo wadanka Soomaliland ee dibadda ayuu u jarmaaday si uu uga qayb galo shirkii lixaad ee cilmi baadhista Qawmiyada Soomaaliyeed ee caalamiga ahaa, kana soo jeediyey qoraal ay ku xardhaneyd: Habka hub ka dhigista iyo is dhexgalka ee ciidanka Soomaliland laguna qabtay magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka sannadkii 1996-kii.Wuxuu si hagar la’aaneed u soo bandhigay qoraalkaa uu kaga waramayey habka ay Soomaliland u hirgalisay hub ka dhigista ugana aasaastay ciidankii reeraysiga ku dhisnaa ciidan qaran.
Ka dibna muddo laba sanno ku dhawaad ah ayuu ka noqday tifatire wargeyska maalinlaha ah ee Jamhuuriya, isagoo qoraalo badan oo ku saabsan siyaasada iyo suugaanta qalinka ku duugay mudadan.
Wuxuu ka qayb galay Mar labaad shirkii cilmi baadhista Qawmiyada Soomaaliyeed ee caalamiga ahaa (SSIA) laguna qabtay magaalada Turku ee waddanka Finland kana soo jeediyey laba warqadood oo ku kala sumadysnaa sidan:
– Horumarka warbaahinta madaxbanaan ee Soomaliland iyo
– Noloshii,suugaantii iyo Curintii dananeed ee Cabdilaahi Qarshe,aasaasihii dananka cusub ee Af
Soomaaliga ah 1998-kii.
Bilawgii sannadkii 1999-kii wuxuu ka mid noqday aasaasayaashii Xaruntdda nabada iyo horumarka una digo rogtay Akaademiyadda Nabadda iyo Horumarka oo uu ka shaqayn jiray ilaa bishii Maarj, 2012-kii markaas oo uu noqday Wasiirka Warfaafinta.
Boob waa qof aad uga feejigan dirirta, iska hor imaadka iyo inuu dhuunigu hago. Waa shakhsi aad ugu dabacsan dadka , mooganeyna qof waliba wuxuu gudo iyo wuxuu galo .
Nin kastoo sallaan dheer u baxa siibashaa xigiye
Suuldaaro waw halis ninkay rag isa seegeene
Sirqabahana taariikhdu way sahamin doontaaye
Abwaan Qaasim (IHUN)
Boobe waa qun yar socde qalinka iyo qorigaba yaqaana sida loo adeegsado laakiin ku xeeldheeraday in uu u meel dayo halka u abbaarayo.Waa samo taliye ay ummada reer Somaliland tirsato kuna guurto xilliga nabadda iyo colaaddaba isagoo jarobixinta marba la sargooya xiliga la marayo.
Boobe waa xaas waxaanu yeeshay 8 ubad ah oo ay laba dhinteen: Cawo iyo Diirye. Waxa nool gabadh iyo 5 wiil. Waa laba bahood: Faadumo Xasan Diiriye iyo Sahiira Xuseen oo dhimatay,
Wuxuu dhalasho la wadaagaa afar wiil iyo shan gabdhood oo laba dhinteen. Waa saddex Bahood. Hooyadii waxay aheyd Xaajiya Cibaado Xaaji Abokor Axmed. Wuxu si fiican ugu hadlaa afka Ingiriisiga, aqoon fiican baanu ka wataa afafka Carabiga iyo Talyaaniga.
Waraysiyo iyo Qoraalo:
∗ “Qorayaashu waa udub dhaxaadka bulsho kasta, waayo waa kuwa dhaxalka taariikhda ah ururiya, hindisana waxyaabo cusub si jiilka soo korayaa u bartaan dhaqankooda iyo taariikhdooda. Cabdi Yuusuf Ducaale waa qoraaga kaliya ee Somaliland ee keydiyey taariikhdii halgankii ururkii SNM, hadday tariikhda SNM hallaabi lahayd waxaa hallaabi lahaa dhaxalkii ummada. Qoraaga Boobe oo ah qoraa uu ilaahay hibo u siiyey wax qorida, wuxuu wakhtigiisa iyo aqoontiisa u huray inuu ururiyo taxanihii taariikhda halganka.
Qofkastoo aqoon leh oo Somaliland ahi wuxuu u aqoonsan yahay inuu Boobe yahay geesi taariikhda dalka baal dahaba kaga jira.”
Maqaal: BOOBE WAA QASNADA TAARIIKHDA IYO SUUGAANTA SOMALILAND, by Cismaan Cali
∗ “Kulankayagii ugu horreeyey ee Boobe wuxuu ku bilaabmay xilli ay iskuuladu fasax ku jireen ayuu safarkayagii ku aaddanaa Magaalada Gabiley nagaga soo darsamay Magaalada Hargeysa, in kastoo waqtigaa aanay gawaadhidu ku leexan jirin magaalada Gabiley oo uu gaadhigii na dhigay Lafta Boqor, dabadeed aanu lugta wada maalnay ilaa magaaladii Gabiley, waxaan ku tilmaami lahaa Boobe: “waa nin hadalo cad cad-‘Straight forward’, aan lab-laabmin, kamana gabbado runta sheegisteeda ,waa ruux ixtiraam badan, waddanimaduna ku dheehan tahay.”
∗Waxaan Boobe ku xasuustaa: “wuxuu ciyaari jiray kubada cagta ,wuxuu ku fiicnaa waxbarashada oo qayrkii hiigsan jireen”. Maax ,
Ururintii Maansadii Timacadde, Daabacaaddii 1aad, 54 Maanso, Madbacaddii Qaranka, Muqdisho, 1983kii,
Ururintii Maansadii Timacadde, Daabacaaddii 2aad, 126 Maanso, Flamingo Printing Press, Addis Ababa 2006dii,
Ururintii Maansadii Timacadde, Daabacaaddii 3aad, 150 Maanso, Madbacadda Sagaljet, Hargeysa, 2017kii,
Deelleey: Saadaal Rumowday, Daabacaaddii 1aad, Flamingo Printing Press, Addia Ababa, 2008kii,
Deelleey: Saadaal Rumowday, Daabacaaddii 2aad, Madbacadda Sagaljet, Hargeysa, 2017kii,
Mullaax, Maalmihii & Maansadii Ibraahin-gadhle, Daabacaaddii 1aad, Madbacadda Sagaljet, Hargeysa, 2012kii,
Ilmadii Hal-abuurka, Baroor-diiqdii Gaarriye, Madbacadda Sagaljet, Hargeysa, 2014kii,
Ibraahin Meygaag Samatar, Daabacaaddii 1aad, Madbacadda Sagljet, Hargeysa, 2017kii,
Mujaahid Bashiir, Daabacaaddii 1aad, Madbacadda Sagaljet, Hargeysa, 2016kii.
Dhaxal-reeb: Horaad, Daabacaaddii 1aad, Flamingo Printing Press, Addis Ababa, 2006dii,
Dhaxal-reeb: 2aad, Daabacaaddii 1aad, Madbacadda Sagaljet, Hargeysa, 2015kii,
Jaamac Maxamuud Xeyd, Amazon Printing Press, Dubai, 2014kii,
Poetry & Life History of Cabdillaahi Suldaan, Flamingo Prinying Press, Addis Ababa, Jan.2012
Less and more than the sum of its Parts: The failed merger of Somaliland and Somalia and the tragic quest for ‘Greater Somalia’. Published in 2015 in the Book “Self-Determination and secession in Africa”
Reconciliation and peacemaking: The Somali National Movement and the Somaliland Experience of state building. Published in 2017 in the Book “State building and national identity Reconstruction in Horn of Africa”
Bahda Mareegta Farshaxan waxay u mahadnaqeysaa dhamaan dadkii kala qayb qaatay qoraalkani inuu suurtoobo iyo dhamaan dadka si hagar la’aaneed u taageera ururinta taariikhda, suugaanta iyo dhaqanka ummada.
Qalinkii, ururintii, iyo tifatirkii: